दुधको विकल्प थाहा छ त तपाइंलाई ? एक पटक पढ्नै पर्ने « News24 : Premium News Channel
दुधको विकल्प थाहा छ त तपाइंलाई ? एक पटक पढ्नै पर्ने
भटमासको दूध ः पशुबाट प्राप्त हुने दूधको सबैभन्दा लोकप्रिय र सहजै उपलब्ध हुने विकल्प भटमासको दूध नै हो । भटमासबाट यो दूध बनाइन्छ । पशुको दूध जत्तिकै पोषिलो हुने भएकाले पनि यसलाई महìव दिइएको छ । भटमासको दूधमा ल्याक्टोज एलर्जीको समस्या पनि हुँदैन । यस दूधमा क्याल्सियम तथा भिटमिन ए, डी र रिबोफ्लाभिन आदि अत्यावश्यक तत्व पनि मिसाएर विदेशमा बिक्री गरिन्छ । प्राकृतिक दूधको तुलनामा क्याल्सियमको मात्रा केही कम (१०० मिलि लिटरमा २५ मिलि ग्राम) भए पनि अरू सम्पूर्ण पोषक तत्व हुन्छ । भटमासमा हुने आइसोफ्लाभोनेस मुटुको स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिएको छ । यसअतिरिक्त अनुसन्धानहरूबाट खुलस्त पारिए अनुसार प्रतिदिन कम्तीमा १० माइक्रोग्राम आइसोफ्लाभोनेस प्राप्त गरेमा स्तन क्यान्सर पुनः उब्जिने खतरा २५ प्रतिशत कम हुन्छ । रजोनिवृत्ति भएका महिलालाई भटमासका तत्वले फाइदा दिन्छ । ती तत्वले एस्ट्रोजिन हर्मोनको पूर्ति गर्न मद्दत गरी रजोनिवृत्ति भएका महिलालाई विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्याबाट मुक्ति पाउन सहयोग गर्छन् । यो दूध बनाउन सजिलो छ । पानी छम्किँदै भटमास मसिनो पारेर पिँध्ने र १५÷२० मिनेट हलुका आगोमा पकाएर त्यसलाई छान्ने । यसरी नै भटमासको दूध बनाइन्छ । यो दूधबाट तोफु बनाउन र दही जमाउन सकिन्छ ।
बदामको दूध ः बदामको दूधमा पशुको र भटमासको दूधभन्दा कम प्रोटिन हुन्छ तर यसको स्वाद असाध्यै मिठो हुने भएकाले शौखिनहरूले यो दूध पिउने गर्छन् । तथापि खर्चका हिसाबले बदामको दूधलाई पशुको दूधको विकल्प मान्न सकिन्न । पोषक तत्वहरू फलाम, क्याल्सियम, भिटामिन ई, फाइबर, रिबोफ्लाविन र म्याग्नेसियमको महìवपूर्ण स्रोत बदामका बारेमा न्युट्रिसन रिभ्यु जर्नलमा उल्लेख गरिएको छ– कोलेस्टेरोल स्तर सुधार्न बदाम सहयोगी हुन्छ । बदाम मुटुका लागि हितकारी छ । ९१–९४ प्रतिशत अनस्याच्युरेटेड फ्याटी एसिड हुने बदामले कोलेस्टेरोल स्वस्थ अवस्थामा मात्र ल्याउने होइन उच्च फाइबर पनि भएकाले पाचन प्रणालीलाई पनि बल पु¥याउँछ । भिटामिन ई धेरै हुने बदामको एक कप दूधले हामीलाई दैनिक आवश्यक पर्ने त्यस भिटामिनको ५० प्रतिशत भाग पूर्ति गर्दछ । बदाम, पानी र गुलिया वस्तु हालेर बदामको दूध तयार पारिन्छ । पशुबाट प्राप्त हुने दूधको अर्को विकल्पमा नरिवलको दूधलाई पनि लिइन्छ । तर यसलाई प्राकृतिक दूधको उपयुक्त विकल्प मान्न सकिन्न ।
बाख्राको दूध ः प्रकृतिलेनै बाख्राको दूधलाई निकै पोषिलो बनाएको छ । महिलाको स्तनको दूध सरह बाख्रीको दूधमा हितकारी चिल्लो, फ्याटी एसिड, प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो पार्ने तत्व, प्रोटिन तथा अन्य धेरै यस्ता तत्व हुन्छन्, जसले बच्चालाई प्राकृतिक रूपमा बलियो हुन सहयोग गर्छन् । अन्य पक्षबाट सुरक्षित छ भने नउमालिएको दूधमा खोप सरहको गुण हुने मान्यता रहिआएको पाइन्छ । गाईको दूधको दाँजोमा बाख्राको दूधमा १५ प्रतिशत अधिक क्याल्सियम तथा भिटामिन ए र डी, पोटासियम, तामा, म्याग्निजसमेत धेरै हुन्छ । फस्फोरस र भिटामिन बीको यो राम्रो स्रोत हो ।